Cufisjiidad - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Surface gravity)
Kani waa maqaal ku saabsan Cufisjiidadka Meerayaasha Koonka. Qaab adeegsi kale, eeg Cufisjiidad (faah faahin).
Garaafiti waxay sababtaa in Meerayaashu ku wareegaan Qoraxda.
Cufisjiidad (Af-Ingiriis: Gravity; Af-Carabi: جاذبية) waa awooda dabiiciga ee isku heeysa meereyaasha iyo xidigaha ay ku wareegaan. Cufisjiidadka lama arki karo lamana maqli karo laakiin waa la dareemi karaa. Awooda cufisjiidadka waa tan suurto galisay inaan dhulka dul socono. qoraxda oo ah Xidig aad u wayn isla markaana leh awood cufisjiidad aad u badan ayaa isku heeysa meereyaasha iyo dayaxyadooda iyo duniyaha kale ee Bahda Midaysay Qoraxdu oo dhulku ka mid yahay.
Cufisjiidadku waa awoodda u yeesha sheyadda miisaan oona ku heysa Oogada dhulka. Tusaale ahaan haddii aad shey kor u tuurtid hoos ayuu u soo dhacayaa. Waxa sababa in shey walba oo kor loo tuuro uu hoos ugu soo dhaco waa awooda la yiraahdo garaafiti ayaa hoos u soo jiidata. Meereyaasha waaweyn ee dabiiciga ah sida dhulka, dayaxa, qoraxda iyo xiddigaha waxey leeyihiin awood cufisjiidad isku heeysa dhamaantood oo wixii u soo dhawaada wey soo jiitaan.
Meereyaashan dabiiciga ah sida way kala awood cufisjiidad badan yihiin. Mid ba' midka uu ka weyn yahay wuu ka garaafiti badan yahay. Tusaale ahaan awooda garaafitiga ee uu dhulka leeyahay waxey ka xoog badan tahay awooda garaafitiga ee uu dayaxa leeyahay sababtoo ah dhulka ayaa ka weyn dayaxa. Awooda garaafitiga ee ay qorraxda leedahay waxay ka xoog badan tahay tan dhulka uu leeyahay sababtoo ah qorraxda waxay ka weyn tahay dhulka.
Dayaxa oo ah duni yar wuxuu ku wareegaa dhulka oo waxaa soo jiita cufisjiidadka dhulka. Dhulka wuxuu ku meereystaa qorraxda oo waxaa soo jiita garaafitiga qorraxda.
Awooda Cufisjiidadka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Qaacidada Sharciga Cufisjiidadka Koonka.
Saamaynta Cufisjiidadka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cufisjiidad&oldid=164907"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Jannaayo 2017, marka ee eheed 03:38.